Alibaba Goes Paperless for $13.4 Billion Listing In A First For Hong Kong: Source | Myanmar Business Today
Home Business International Alibaba Goes Paperless for $13.4 Billion Listing In A First For Hong...
The logo of Alibaba Group is seen at the company’s headquarters in Hangzhou, Zhejiang province, China July 20, 2018.
Alibaba Group will carry out Hong Kong’s first paperless stock market listing with its $13.4 billion share sale, according toasource with knowledge of the matter, ending the long-held tradition of Hong Kong investors queuing in bank branches to place stock orders.
Alibaba Group သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃ဒသမ၄ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိသော ရှယ်ယာများကို ရောင်းချကာ ဟောင်ကောင်၏ ပထမဆုံးသော စက္ကူမပါသည့် စတော့အိတ်ချိန်းစာရင်းဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ထိုကဲ့သို့ စက္ကူမလိုဘဲ စတော့အိတ်ချိန်းစာရင်းဝင်လိုက်သောကြောင့် ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့် ယခင်ကကဲ့သို့ စတော့ဝယ်ယူရန်အတွက် ဘဏ်ခွဲများတွင် တန်းစီကာ အမှာစာ‌သွင်းရခြင်းများ ပြုလုပ်စရာလိုတော့ မည်မဟုတ်ပေ။
ယခုကဲ့သို့ အလိုအလျောက် စတော့ရှယ်ယာများ ဝယ်ယူရောင်းချခြင်းပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ ဟောင်ကောင်အနေဖြင့် ပြည်တွင်း မငြိမ်သက်မှုများ ကြုံတွေ့နေရသည့်အချိန်တွင် ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအပတ်တွင် ဟောင်ကောင်ရှိ ဆိုင်ပေါင်းများစွာမှာ စောစော ဆိုင်ပိတ်ခြင်း၊ ဆိုင်မထွက်ခြင်းမှား ရှိခဲ့သည်။
Alibaba အနေဖြင့် ၆၆၁ မျက်နှာရှိသော စတော့အိတ်ချိန်းစာရင်းဝင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို ထုတ်ပြန်သွားမည်မဟုတ်ပေ။
Alibaba ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အမျိုးသမီးကတော့ ကုမ္ပဏီ၏ စတော့အိတ်ချိန်းစာရင်းဝင်ရန် အစီအစဥ်နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာ မှတ်ချက်ပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
သောကြာနေ့တွင် Alibabaသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား စတော့ရှယ်ယာဝယ်ယူခွင့် စတင်ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။
ကနဦးထုတ်ရောင်းချမှုတွင် စုစုပေါင်း ရှယ်ယာ ၁၂ဒသမ၅ သန်း ထုတ်ရောင်းသွားမည်ဖြစ်ကာ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၂ဒသမ၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။
SOURCEScott Murdoch (REUTERS)
Previous articleGerman Automation Talent Powers Musk’s Battery Move to Europe
Next articleSterling Steady as Traders See Conservative Majority After Election